Nexus 4 Android 4.4 KitKat Abịawo - Mgbe Ọ Ga-adị njikere maka Nexus 7
> Resource> Android> Nexus 4 Android 4.4 KitKat Abịawo - Mgbe Ọ Ga-adị njikere maka Nexus 7?
Naanị maka Nexus 4!
Mbụ nke ọnwa, Google tọhapụrụ Android 4.4 KitKat update. Mbụ, ọ na e Ẹnam ekese na Nexus 5, Google ọhụrụ Nexus smartphone tọhapụrụ a izu ole na ole gara aga. Mgbe ahụ Google mara ọkwa na Android 4.4 KitKat ga-inyefe ka ọtụtụ ndị ọzọ na ngwaọrụ, Nexus 4 na Nexus 7 gụnyere.
Mgbe ahụ, ọtụtụ n'ime ọrụ na-eche ma na-eche banyere ha N'ime-na-na Air kwalite. The update ka Nexus 4 N'ikpeazụ rutere ụnyaahụ, ma ruo ugbu a, ka ọ update ozi ọma Nexus 7 ọrụ. O doro anya na, ọ were ya ọrụ.
Gịnị mere ọ bụghị Nexus 7?
N'adịghị ka iOS mmelite, Android na-eji ndị ọzọ ọtụtụ ebe dị iche iche na ụdị na ụdị nke smartphones na mbadamba. Ọ bụghị otú ahụ mfe tụgharịa ya na-akụrisị onye ọ bụla n'otu oge, ma izu abụọ bụ ezuwo. Ọ dịkarịa ala, ụfọdụ nwe nke Nexus 7 furu efu iwe ha n'elu ya, na-amalite mkpesa na ikwu ha obi nkoropụ na mmadụ mgbasa ozi saịtị dị ka Facebook, Twitter.
Gịnị mere e ji Nexus 7 adịghị gụnyere oge a? Ọ bụ eleghị anya n'ihi na Google chọpụtara a ahụhụ n'ime mbụ KitKat Mee. Previous Nexus Android mmelite ndidi kemgwucha adọkpụ. Google nwere ike ka na-arụ ọrụ siri ike iji jide n'aka na a melite na-adịghị ịnyịnya na-adọkpụ. Ọ bụrụ na nke a bụ n'ezie, ọ bụ ka ruru ya.
Ọ bụla ikpe, na Android 4.4 KitKat ga-abịa ọ bụla onye nwe Nexus 7 n'ihu nke mmelite maka Galaxy S4, Galaxy Cheta 3 na ndị ọzọ.
Mgbe maka Nexus 7?
Google mara ọkwa Android 4.4 KitKat update maka Nexus ngwaọrụ na ya website. Ihe anyị pụrụ ịmụta site na ya bụ KitKat ga-abịa Nexus 4, Nexus 7 na Nexus 10 mbụ, ma e wezụga ndị Nexus 5. Ọ ekwugh na kpọmkwem ụbọchị nke update. Ma ọ bụrụ na rumo ziri ezi, na-atụ anya na anyị nwere ike inwe ya n'izu a.
Metụtara KitKat (Android 4.4)
E nwekwara ndị ọzọ ọmụma njikọ ndị ọhụrụ KitKat, na i nwere ike ga-esi mara na ọ n'oge anwu. Ọ bụ Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery), ụwa mbụ Android data mgbake software,-enyere gị aka naghachi ehichapụ kọntaktị, ozi, photos, videos, ọdịyo na akwụkwọ si nza nke Android igwe na mbadamba. Oké-ekwu bụ na ị na-adịghị mkpa nwere ọ bụla oru nkà mgbe ị na-eji ya. Ọ bụ kpam kpam ọrụ enyi na enyi na oké n'ihi na ndị mmadụ na-ata ahụhụ na data ọnwụ na ha Android ngwaọrụ.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị, ma ọ bụ na-aga ebe a na-ele ndepụta nke na-akwado na ngwaọrụ na Android.
Naghachi Lost Files si gam akporo: Isiokwu a na-agwa gị otú ị naghachi ozi, kọntaktị, photos, video na ndị ọzọ si Android. Naghachi Photos si Nexus 7: Soro a ndu naghachi ehichapụ foto site na Nexus 7. ​​Ọ bụ a bara uru nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi. Naghachi Videos si Nexus 7: Isiokwu a na-egosi gị otú ị naghachi vidiyo na a Nexus 7 na 3 nzọụkwụ, na i nwere ike inwe a free ikpe mbipute n'ebe ahụ. Naghachi Photos si Nexus 4: Lelee isiokwu a ịmụta otú naghachi ehichapụ photos si a Nexus 4. Naghachi faịlụ site Galaxy Nexus: Nke a ndu na-agwa gị otú ị naghachi kọntaktị, SMS, foto, video, ọdịyo na akwụkwọ si Galaxy Nexus na 3 nzọụkwụ. Naghachi Data si Nexus S: Gụọ isiokwu a na-eso ya na-agbake photos, ozi, kọntaktị, videos, na ndị ọzọ si Nexus S. Samsung Galaxy Cheta Data Recovery: Soro ntuziaka a ndu naghachi ehichapụ data si Samsung Galaxy Cheta.
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site Galaxy Nexus
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi na Samsung Galaxy S4
� Download Download
Otú nyefee Ndi ana-akpo si Lumia ka Android
Olee otú mmekọrịta Outlook kọntaktị na Moto X
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site Samsung Tablet
Olee otú iyi Videos site na kọmputa na-Android